Kaddib dhaawacii xalay soo gaaray miyuu goolhayaha Man United ee David de Gea seegayaa kulanka Liverpool? – Gool FM
Kaddib dhaawacii xalay soo gaaray miyuu goolhayaha Man United ee David de Gea seegayaa kulanka Liverpool?
Haaruun October 16, 2019
(Manchester) 16 Okt 2019. Goolhaye David de Gea ayaa shaki weyn laga galinayaa kulanka Premier League oo ay horraanta todobaadkan kooxdiisa Manchester United qaabilayso Liverpool, kaddib markii uu xalay dhaawac kaga baxay kulankii isreeb-reebka Euro 2020 oo uu xulkiisa Spain la ciyaaray Sweden.
28-sano jirkaan ayaa dhaawac gumaarka ah kaga baxay garoonka kulankii xalay ay la dheeleen Sweden, taasoo ku hoggaamisay Kepa Arrizabalaga inuu soo galo garoonka si uu bedel ugu noqdo shabaq-ilaaliyahan.
De Gea ayaa awooday inuu socod ku baxo kaddib markii uu dhaawacmay, laakiin goolhayaha xulka Spain waxaa shaki weyn laga galinayaa kulanka kooxdiisa Man United ay garoonkeeda Axadda ku soo dhoweyn doonto Liverpool.
Kepa ayaa u soo muuqday inuu yahay lambarka koowaad xulka Spain ee uu hoggaaminayo macallinka cusub ee Robert Moreno, laakiin De Gea ayaa loo taagay inuu ka hor tago Sweden si uu u helo safashadiisii 41-aad.
Goolhayihii hore ee kooxda Atletico Madrid ayaa laga dhaliyey siddeed gool sagaal kulan oo uu Red Devils u ciyaaray xilli ciyaareedkan, waxaana uu shabaqiisa gool ka ilaashaday kaliya saddex kulan.
Man United ayaa ku bilaabatay bilowgeedii ugu xumaa xilli ciyaareedka 30-kii sano ee ugu dambeeyay, iyagoo uruursatay kaliya sagaal dhibcood siddeedii kulan ee ugu horreeyay horyaalka xilli ciyaareedkan 2019-20.
RASMI: Xulalka illaa iyo haatan iska xaadirisay Koobka Qarammada Yurub ee Euro 2020